Ihe bara uru nke mmiri ara ehi aki oyibo
Mmiri oyi na-eme ka mmiri ara ehi bụ ọtụtụ ihe na ngwaahịa pụrụ iche. Na mgbakwunye na uto na-adọrọ adọrọ nke na-eme ka ihe ndeputa na-enye ume ọhụrụ, ihe ọṅụṅụ ahụ bara ọgaranya n'ime ihe ndị dị n'ime ala ndị na-eweta uru dị ukwuu n'ahụ anyị. Ihe oriri na-edozi ahụ Iji malite, ka anyị nyochaa ihe ngwongwo nke ngwaahịa a Dị ka USDA Nutrient Database, 100 g nke ihe ọṅụṅụ nwere: protein - 2.29 g; abụba - 23.84 g; carbohydrates - 3.34 g.
Ubi nke actinidia n'ogige: ndụmọdụ bara uru maka ndị na-amalite
Osisi vine osisi actinidia na-adọrọ mmasị maka mkpụrụ osisi ya dị ụtọ na nnukwu mkpụrụ nke ascorbic acid, unpretentiousness (ịkụ na ilekọta ya abụghị ihe siri ike), ogologo ndụ (ndụ ruo afọ 40). Na mpaghara dị jụụ na okpomọkụ na oyi na-atụ, ọtụtụ ụdị ubi dị iche iche nke ubi (colomikta, argut, polygamous, purpurea, wdg) emewo nke ọma ịmalite mgbọrọgwụ.
Isi iwu nke akuku na ilekọta mamaordika
Ịgha mkpụrụ Momordica na Momordica seedlings, nke a makwaara dị ka cucumber ọhịa, kukumba India, crocodile cucumber, ugbo nke ebe okpomọkụ, balsamic ube na ọtụtụ ndị ọzọ, bụ osisi na-eme kwa afọ nke ezinụlọ nke ugu. Enwere ike itolite dị ka okooko osisi, n'ime obodo ma ọ bụ n'ogige maka ihe eji achọ mma (okooko osisi na mkpụrụ osisi nke momordiki anya mara mma), yana ihe oriri ma ọ bụ ọgwụ osisi.
Skwọsh: mejupụtara, ọdịnaya caloric na uru bara uru nke ngwaahịa a
Skwọsh - onye ikwu nke ugu na zucchini, akwukwo nri mara mma, yiri nke ndi na-efe efe. Ọ si na South America ma mara ya nke ọma n'ụwa niile. Cooks hụrụ ya n'anya ọ bụghị nanị maka oke ụtọ ya na ihe oriri bara uru, kamakwa maka ihe ndị bara uru ya, n'ọtụtụ nke skwọsh ahụ karịa "ụmụnne" ya - zucchini na ugu.
Ntuziaka na ụzọ isi nweta ihe ubi maka oyi
N'elu akwa ị nwere ike ịchọta obere efere dị iche iche ma ọ bụ mpempe akwụkwọ n'okpuru nnukwu epupụta. Nke a bụ scallops. A na-eji ha eme ihe na-atọ ụtọ, mana ha anaghị adịkarị mma na kichin, nke a adịghịkwa mkpa. Ihe oriri a sitere na America site na America mgbe Columbus chọtara ya, na French, skwọsh pụtara "akara".
Tee ụmụaka na fennel maka ụmụ ọhụrụ na ụmụaka toro eto. Kedu ihe o ji mee ihe na otu esi etinye ya n'ọrụ?
Ụkpụrụ ndị na-eto eto na-eto eto na dacha
Nke a, Belarusian potato "Lileya": nkọwa nke ọtụtụ na ụzọ nke nlekọta
Mkpụrụ osisi Moss - dị ka ha dị
Nwa agbọghọ na-eto eto Pieris bụ onye Japan nọ n'ogige ahụ
Tomato "Masha Doll F1" - ọkpụkpụ na-eme ka ọ ghara ịdabere na ya
Otu esi ekpuchi ahihia ma kwadebe maka oyi